Wararka - Forward130th Canton Fair in lagu qabto online iyo offline labadaba
July 21, website-ka rasmiga ah ee Wasaaradda Ganacsiga Jamhuuriyadda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in Carwadii 130aad ee wax soo dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha (Canton Fair) lagu qaban doono online iyo offline laga bilaabo Oktoobar 15 ilaa 3 November, iyadoo guud ahaan muddada bandhigga. 20 maalmood.
Carwadii 130-aad ee Soo dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha (Canton Fair) ayaa la qaban doonaa inta u dhaxaysa Oktoobar 15 iyo Noofambar 3 iyada oo qaab online iyo offline la mideeyey. 16 qaybood oo badeecooyin ah oo ka kooban 51 qaybood ayaa la soo bandhigi doonaa waxaana aag nolol maalmeedka miyiga loo qoondayn doonaa labadaba khadka iyo goobta si loo soo bandhigo alaabada meelahan laga soo qaatay. Bandhiga goobta ayaa sida caadiga ah loo qaban doonaa 3 waji, iyadoo waji kasta uu socon doono 4 maalmood. Wadarta guud ee goobta bandhiggu waxa ay gaareysaa 1.185 milyan m2 iyo tirada guryaha caadiga ah ee ku dhow 60,000. Wakiilada Shiinaha ee ururada iyo shirkadaha dibadda, iyo sidoo kale iibsadayaasha gudaha ayaa lagu martiqaadi doonaa inay ka soo qaybgalaan bandhigga. Shabakadda internetka ayaa horumarin doonta hawlo ku habboon dhacdada goobta iyo in ay keento dad badan oo soo booqda si ay uga qaybgalaan bandhigga jireed.
Carwada Canton waa dhacdo ganacsi oo caalami ah oo dhameystiran oo leh taariikhda ugu dheer, miisaanka ugu weyn, noocyada bandhigga ugu dhameystiran, iyo ganacsiga ugu weyn ee Shiinaha. Waxaa lagu qabtay qarniga CPC, Carwada Canton ee 130aad waa mid muhiimad weyn leh. Wasaaradda ganacsigu waxay la shaqayn doontaa maamulka gobolka Guangdong si loo horumariyo qorshayaasha kala duwan ee ku saabsan abaabulka bandhigga, hawlaha dabbaaldegga iyo ka hortagga iyo xakamaynta masiibada, si loo sii ciyaaro doorka Canton Fair oo ah madal loogu talagalay furitaanka oo dhan iyo xoojinta guulaha laga gaaray ka hortagga iyo xoojinta. xakameynta COVID-19 iyo sidoo kale horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha. Carwadu waxay u adeegi doontaa qaabka cusub ee horumarinta iyadoo wareegga gudaha uu yahay tiir-dhexaadka iyo wareegga gudaha iyo caalamiga ah oo midba midka kale xoojinayo. Shirkadaha Shiinaha iyo kuwa caalamiga ah waxaa lagu soo dhaweynayaa inay booqdaan munaasabadda weyn ee 130-aad ee Canton Fair si loo abuuro mustaqbal wanaagsan.
Saamaynta ugu weyn ee Matoorka Badda, Ku riix In Connecting Rod, Conrod Bearing, Biraha B58, Dhaashaadka Ugu Sareeya Iyo Dhamaadka Dhamaadka Hoose, Ku-Xiritaanka Matoorka,